Blaogim-Piarahamonina GV · Desambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin'ny Desambra, 2017
Talanjona Tamin'ireo Fasana Mihantona
Mediam-bahoaka31 Desambra 2017
Niaraka tamin'ireo diplaomaty sy ireo ambasadaoro avy any amin'ny firenena maromaro aho nitsidika ireo faritra Kete 'Kesu sy Londa. Hita any amin'ny faritry ny tendrombohitra ireo toerana roa ireo , tsy lavitra an'i Rantepao ao Toraja.
Tokony Hitovy Kokoa Amin'ny Global Voices Izao Tontolo Izao
"Raha niomana hisidina hiala an'i Sri Lanka aho taorian'ny Fihaonana andiany 2017, tsy vitako ny tsy hieritreritra fa tokony hitovy kokoa amin'ny Global Voices izao tontolo izao: toerana feno fitiavana sy fangorahana handraisana an-tànan-droa ireo hevitra mitandro ny fandriampahalemana."
Anontanio ireo Mpikambana ao amin'ny Filankevitra
Mihaino izy ireo, miteny, mamaly fanontaniana, saingy ambonin'izay rehetra izay, mandray lesona avy amintsika tsirairay avy.
Ampy hanaisotra ireny eritreritra rehetra ireny ny andro voalohany nanaovana fivoriana anatiny, nahazoako toky fa tena tonga amin'ny toerana niriako haleha tokoa aho, tena manao izay zavatra tiako natao
Folo Taonan'ny Finamànana Mahafinaritra
Mediam-bahoaka10 Desambra 2017
Folo taona lasa nanaovana fitsidihana tsy mampino. Fitsangatsanganana toy inona re izany!
Na Namely Tampoka Aza Ny Tafio-drivotra, Dia Mijoro Tsy Mihontsona Izahay.
Mediam-bahoaka04 Desambra 2017
Miaraka amin'ireo rivotra mafibe (60-70 km/h) sy ireo orambe mivatravatra izay naharitra ora 12 mahery, toy ny hoe rovitra ny tontolo manodidina anay. Saingy ao anatin'ny Efitrano Regrency tao amin'ny hotely Mount Lavigna, manohy miasa mafy sy miara-miala voly ny vondrom-piarahamoninay.